Mozea Quai Branly – Jacques Chirac : Fampirantiana momba an’i Madagasikara
03/09/2018 admintriatra 0
Haharitra telo volana sy tapany. Manomboka ny 18 septambra izao ka hatramin’ny 1 janoary 2019, hisy ny fampirantiana momba an’i Madagasikara ao amin’ny tranombakoka Quai Branly –Jacques Chirac any Frantsa. Asehon’io fampirantiana ion y tantara …Tohiny
Forum Sino-Afrique (Focac) : Hanatrika ny fivoriambe ny Filoha
Hotanterahina anio sy rahampitso, any Beijing, Sina, ny fivoriambe amin’ny fiaraha-miasa Sinoa sy Afrika (Focac). Anisan’ireo firenena afrikanina mandray anjara amin’izany i Madagasikara. Mitarika ny delegasiona malagasy hiatrika izany fihaonambe izany ny Filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina. …Tohiny
Didier Ratsiraka : Vonona hiatrika fifidianana
Naneho fa tena mbola ao anatin’ ny heriny tanteraka ny Amiraly, amin’ izao hakatoky ny fifidianana izao. Ny asabotsy lasa teo, tazana tamin’ ny haino aman-jery tsy miankina iray teto andrenivohitra, fandarahana manokana miresaka ny …Tohiny
Distrikan’Iakora : Dahalo 30 maty voatifitra
Dahalo manodidinany150 nirongo basy nandravarava ny tananan’Anolaka, fokontanin’Andranomanga distrika Iakora, ny alin’ny alarobia hifoha alakamisy lasa teo. Maherin’ny 30 tamin’ireo no maty voatifitra nandritry ny fanarahan-dia nataon’ny avy eo anivon’ny zandarmariam-pirenena narahan’ny “Groupement Ihorombe”, “Compagnie …Tohiny